. * . * . ထာဝရကြယ်စင် . * . * .: April 2010
ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီ မြန်မာတို့အတွက် နှစ်သစ်ကူးတရက် ...။
4/10/2010 06:55:00 AM
တချို့သော လမ်းထိပ်များတွင် ညနေဆိုင်လေးများဖြင့် စည်ကားနေသည် .. ပိုက်ဆံ ရှားပါးသည်ဟု မည်မျှပင် ဆိုစေကာမူ ဘီယာဆိုင်နှင့် လ္ဘက်ရည်ဆိုင်များတွင်တော့ လူများ ပြည့်လျှက် ရှိကြသည် .. ဘီယာဆိုင်နှင့် လ္ဘက်ရည်ဆိုင်များသည် ညဘက် မိုးချုပ်သည့် အချိန်မျိုးတွင် ကားလမ်းမနားထိတိုင်အောင် ခုံများခင်းလျှက် ရောင်းချကြသည် .. လူကြီး လူလတ် လူငယ် များသည် လမ်းဘေးနားကျကျတွင် နေရာယူလျှက် ပင်ပန်းမှုများကို ၀ါသနာပါရာ ဖြေဖျောက်ကြသည် .. တနေရာတွင် ကျမ ငယ်စဉ်က စီးခဲ့ဘူးသော ဆိုက်ကားဆရာကြီး လူစောင့်နေသည် .. နောက် တနေရာတွင် ကျမ ငယ်စဉ်က စာတူတူ သင်ခဲ့ဘူးသော ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်းမလေး တဦးလည်း လူစောင့်နေသည် .. ဆိုင်ကြီးတချို့မှ သီချင်းသံ ဆူဆူညံညံများ ရောနှော အော်မြည်နေကြသည် .. လူငယ်တအုပ် အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် သီချင်းတပုဒ်ကို သံပြိုင် ဆိုသွားကြသည် .. တနေရာတွင် အရက်မူးသမားကြီးတဦး ရေချိန်မကိုက်သေးဘဲ ရစ်နေသည် .. တနေရာတွင် ပွဲစား အမျိုးသမီးကြီး တဦး စကားတွင်တွင်ပြောရင်း အတင်း အုပ်နေသည် ..
တချို့ အိမ်ရှေ့တွေမှာ အမျိုးသမီးကြီးများ ယပ်တောင် တဖျတ်ဖျတ်ဖြင့် ခြင်မောင်းလျှက် ရှိကြသည် .. ထိုအချိန်တွင် ၁၅ မိနစ် ပြည့်ပြီထင့် .. မီးများ တပြိုင်နက် မှောင်ကျသွားလေသည် .. လူများအားလုံးတာဝန်ကိုယ်စီဖြင့် ဖယောင်းတိုင် ထွန်းသူထွန်းကြသည် .. လက်နှိပ်ဓါတ်မီးရှာ၍ မီးအားမြှင့်စက် ပြေးချကြသည် .. မြည်တွန်တောက်တီး၍ မီးစက် ပြေးနှိုးသူ နှိုးကြသည် .. ကလေးများကတော့ ကစား မပျက် ..
4/03/2010 12:59:00 AM
တချိန်တခါတုန်းကတော့ ဒီလိုနေ့ရက်မျိုးတွေမှာ ငိုသံစွက်တဲ့ ရယ်သံတွေနဲ့ ချိုမြိန် သာယာခဲ့ဘူးတယ် .. x x x x x စိတ်ရှုပ်နေတဲ့ ဧည့်ကြိုကောင်တာက အမျိုးသမီးကိုလည်း အားနာလှပြီ .. သူမ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ နောက်တကြိမ် တောင်းတောင်းပန်ပန် ပြန်ရှာခိုင်းမိတော့ ..
"April fool" ပြိုင်တူ အော်လိုက်တဲ့ အသံကြောင့် သူမ လန့်သွားခဲ့တယ် .. ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ သူတို့မျက်နှာတွေ မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျမ ဒေါသတွေလည်း အထွဋ်အထိပ် ရောက်လို့ပေါ့ .. ကျမ အရူးလုပ်ခံလိုက်ရတယ်လေ .. တချိန်တည်းမှာပဲ ကျမ ရှက်စိတ်နဲ့ ဒေါသ စိတ် ပေါင်းပြီး မျက်ရည်တွေ စီးကျ လာခဲ့တယ် .. ကျမ မျက်ရည်ကို မြင်တော့ .. "ငယ် .. ငယ် .. မငိုပါနဲ့ကွာ .. ကိုယ်က စလိုက်တာပါ .. ပြီးတော့ ဟိုကောင်တွေ တရားခံ .."
အပြန် လမ်းတလျှောက်လုံးလည်း သူက ချည်း စကားတွေ များလာခဲ့တယ် .. တောင်းပန်စကားလည်း အထပ်ထပ် ဆိုရင်းပေါ့ .. x x x x x
ဒီလိုပါပဲ .. ကျမ ချစ်သူရ ကံကောင်းခဲ့လား ကံဆိုးခဲ့လား ကိုယ်တိုင် မဝေခွဲနိုင်ခဲ့ဘူး .. ကျမ ချစ်သူက ကျမပြုံးနေရင် ငိုစေသူ .. ကျမ ငိုနေရင်လည်း ပြုံးစေနိုင်သူ .. အစ အနောက်သန်တဲ့ သူ့ကြောင့် ကျမ အမြဲတမ်း ငိုခဲ့ရတယ် .. ပြီးတော့ ပြောသေးတယ် .. ချော့ချင်လို့ ငိုတဲ့ထိ စတာတဲ့ ..
"ကိုယ်ပြင်လို့ မရတဲ့ အမှားတခု လုပ်ခဲ့တယ် .. ငယ် ကိုယ့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ .." သူက ဒီလိုပါပဲ အမိန့်သံတွေနဲ့ ကျမဘ၀ကို ကြီးစိုးချင်တဲ့သူ .. "ကိုယ်မိန်းကလေးတယောက်ကို လက်ထပ်ရတော့မယ် .." ဒီစကားသံဟာ ကျမအတွက် ဘယ်လောက်များ ရက်စက်ပါသလဲ .. "ကိုယ့်ကို စကားတခွန်းလောက် ပြန်ပြောပါဦး .."
"ကိုက ဘာစကား ကြားချင်တာလဲ .. ငယ်က ကြည်ဖြူပါတယ် .. အဲဒီ မိန်းကလေးနဲ့ လက်ထပ်ပါလို့ ပြောစေချင်တာလား .." ငိုသံမစွက်အောင် ကြိုးစားပြောတဲ့ ကြားကကို မျက်ရည် လွယ်လွန်းတယ် .. ကျမ မျက်ရည်ကို မြင်မှ .. မျက်နှာ ပြုံးထေ့ထေ့နဲ့ ..
ဘယ်လိုလဲ .. ကျမ ရူးသွားနိုင်လောက်တယ်နော် .. ချစ်ခြင်းတွေကို ရူးသွပ်စွာ ခံစားတတ်တဲ့ ကျမနဲ့ အရာရာကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြတ်သန်းတတ်တဲ့ သူ .. နှစ်ယောက်သား အရာရာမှာတော့ ထပ်တူမကျနိုင်ခဲ့တာပဲလေ .. ကျမကို နောက်ထပ် မစပါနဲ့တော့ .. လို့ တောင်းတောင်း ပန်ပန်ပြောတိုင်းလဲ .. ကျမရဲ့ မျက်ရည်တွေကို သုတ်လို့ နောက် လုံးဝ မစတော့ဘူးနော် ဆိုတာနဲ့သာ အဆုံးသတ်လေ့ ရှိတာပါပဲ .. x x x x x
ကျမ အတွေးစတွေကို ဖြတ်လို့ သူ့ဘက်ကြည့်မိတော့ သူ့မျက်နှာက ပကတိ ကြည်စင်နေတာပါပဲ .. သူက အမြဲ ဒီလိုပဲလေ .. မျက်ဝန်းတွေကိုက သိပ် ရိုးသားလွန်းပါတယ် .. "အရမ်း စိတ်ဆိုးသွားလား .."
"အင်းပါ ထပ်မပြောတော့ဘူး .. အဲဒါ အတည်ပဲ .. ကို သာ နောက်တခါ ခုလို အဖြစ်မျိုး ထပ်မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ .. နော် .. ငယ် ခုနက ဘယ်လောက်တောင် စိုးရိမ်နေတယ် မှတ်လဲ ကိုရဲ့ .." x x x x x
မနက် မိုးလင်းလင်းချင်း သူမ စိတ်တွေ လေးလံနေခဲ့တယ် .. ဒီချိန်မှာပဲ တယ်လီဖုန်းသံ မြည်လာခဲ့တယ် .. x x x x x
သူမ ဆေးရုံမှာ လူတွေကို လိုက်စကားပြောပေမယ့် ဘယ်သူတယောက်ကမှ ပြန်အဖြေမပေးခဲ့ဘူး .. သူမ မောနေပါပြီ .. စိတ်တွေရော ရင်တွေရော ပူလှပြီ .. ကျမ ချစ်သူနာမည်ကို ရှာပေးကြပါ .. x x x x x